I-Cottage kwindlela yokufudukela kwamanye amazwe - I-Airbnb
I-Cottage kwindlela yokufudukela kwamanye amazwe
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguCraig
Le Ndwendwe, yabucala yeeNdwendwe incanyathiselwe kwindlu yasefama ekwiikhilomitha ezi-4 ukusuka eDowntown Denison. Yonwabela ukubaleka okuzolileyo kunye nokutshona kwelanga okuqaqambileyo kunye noBusuku obuNkwekwezi obuqaqambileyo. Yenza ii-smores kunye ne-hotdogs kwindawo yokutshisa umlilo, okanye uphume! Iimayile nje ezimbalwa ukusuka kwi-Historic Carpenters Bluff ibhulorho umlambo obomvu kunye neLake Texoma! Jonga isikhokelo sethu seTexoma kuzo zonke iindawo ezilungileyo kunye neendawo zokutyela!
Sicoca kwaye silandela yonke i-covid protocol. Izilwanyana ziya kuvunyelwa xa ziceliwe.
Eli liphandle laseGrayson County, iikhilomitha ezi-4 ukusuka edolophini yaseDenison kunye neekhilomitha ezi-4 ukusuka kumda weTexas kunye ne-Oklahoma. Abamelwane bathe saa, kwaye kuthe cwaka ngokubanzi.
I-Cottage yindlu yeendwendwe edityaniswe nendlu enkulu ke sihlala sikufutshane ukukhathalela naziphi na iimfuno onokuthi ube nazo. Imfihlo yethu yeendwendwe yeyona nto iphambili kuthi. Sazise ukuba ufuna nantoni na ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke ngakumbi!
I-Cottage yindlu yeendwendwe edityaniswe nendlu enkulu ke sihlala sikufutshane ukukhathalela naziphi na iimfuno onokuthi ube nazo. Imfihlo yethu yeendwendwe yeyona nto iphambili ku…